Dr. Tint Swe's Writings: November 2017
• အဲသည်နှစ်မိုးတွင်း ငါတို့ရန်ကုန်ဆင်းကြရ၏။
• ဂန္ဒီကအဆင်းမှာ ထီးမပါတဲ့ငါတို့ကို ထီးမဆောင်းတဲ့လူထုက ဖြောင်းဖြောင်းလက်ခုပ် တီးပေးကြ၏။
• ၁/၉ဝ နဲ့တုံ့ပြန်တာကို ငါတို့က သုံးလရာဇသံ ပြန်ပေးလိုက်ကြ၏။
• နာခံမယ်မဟုတ်မှန်းလဲ ငါတို့ မသိမရှိ။
• အညာတက် အကွက်ချဘို့ဖြစ်လာ၏။
• ဟိုနေရာသည်နေရာထိုင်ပြီး တိုင်ပင်ကြ၏။
• တောင်းတာမရရင် ညောင်းကြမှဖြစ်မည်၊
• အလီ ဆယ့်လေးကို နှစ်နဲ့မြှောက် နှစ်ဆယ့်ရှစ်ယောက်၊
• နောက်ထပ် နှစ်ဆယ့်ရှစ်ယောက် သွေးသောက်။
• ထောက်လှမ်းရေးတကောက်ကောက် ကြံတိုင်းမပေါက်၊
• တဖက်ကမ်းရောက်သူကရောက်၊ ငရဲခန်းရောက်သူကရောက်၊
• ထင်တိုင်းမပေါက်ပေမဲ့ ကြံတဲ့အတိုင်းမြောက်ခဲ့ကြ၏။
• အဲသည်နှစ်ဆောင်းမှာ ငါတို့ဖါသာ အစိုးရဆိုတာဖွဲ့ခဲ့ကြ၏။
• ငါတို့အတွက် နေပြည်တော်ကား တည်ပြီးသား၊ ဝါးတော သစ်တော မာနယ်ပလော။
အခုနေပြည်တေ်ာမှာ လွှင့်ထားတဲ့အလံကို မာနယ်ပလောရုံးမှာ အဲသည်ကာလမှာ လွှင့်ထားပါတယ်။
(၁၈-၁၂-၁၉၉ဝ မှာဖွဲ့ခဲ့တဲ့ စဉ်ပြိုင်အစိုးရ အမှတ်တရ)
• အဲသည်နှစ်နွေမှာ ငါ ရွာတကာရောက်ရှိ၊
• အဲသည်နှစ်မေမှာ ငါ အဖြေရရှိ၊
• ရွေးကောက်ပွဲမှာ ငါ နိုင်၏။
• အဲသည်နှစ်ဆောင်းမှာ ငါ့ကို လာဖမ်းကြတော့၏၊
• အဲသည်နှစ်ဆောင်းမှာ ငါ ပုန်းအောင်းခဲ့ရ၏၊
• အဲသည်နှစ်ဆောင်းညမှာ ငါ ထွက်ပြေးရတော့၏။
• အဲသည်နှစ်ဒီဇင်္ဘာ ငါ အိမ်မှာမရှိ၊
• အဲသည်နှစ်ဒီဇင်္ဘာကတည်းက ငါ့အိမ်ကို ပြန်မကြည့်၊
• အဲသည်နှစ်ဒီဇင်္ဘာကစပြီး အိမ်ပြန်မရောက်နိုင်တော့မှန်း ငါမသိ။ ၂၈ နှစ်တိတိ။
၁။ ဆရာရှင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်က X-rays နဲ့ ပစ္စည်းကိုစစ်တဲ့ gate pass မှာ ပစ္စည်းထည့်စစ်ပြီး နေ့တိုင်း သွားရပါတယ်ရှင်။ ပြီးတော့ လူဝင်ပေါက်မှာလဲ စက်တပ်ထားပါတယ်ရှင်။ ရှောင်ဖို့လိုနိုင်မလား သိချင်ပါတယ်ရှင်။ ကိုယ်ဝန်က ခု ၂ လပါရှင့်။
၁။ ရွှေတိဂုံဘုရားသွားဖူးရင်တော့ လုံခြုံရေးအတွက်ထားတဲ့ X ray စက်ထဲ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကိုလည်း ဖြတ်ခိုင်းတယ်။ Super market တွေကတော့ မဖြတ်ခိုင်းဘူး။ ဘုရား ခဏခဏသွားဖူးဖို့တောင် ခပ်လန့်လန့်ရယ်။
၂။ ဆရာ ကျနော်တစ်ခုလောက်မေးချင်လို့ပါ။ ကျနော်အမျိုးသမီးကအခုကိုယ်ဝန် (၇) လရှိပါပြီ။ ပထမဦးဆုံး ကိုယ်ဝန်ပါ။ မြန်မာပြည်ကို ပြန်ပြီးမွေးဖွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါ ယခုပြန်လျှင်လေဆိပ်မှာ X-Ray ဖြတ်၍ ပြန်ရမှာဆိုတော့ X-Ray က ကလေးကို ထိခိုက်နိုင်ပါသလားဆရာ။ နောက်ပြီး အခြားကာကွယ်မှုတွေ လုပ်သွားဖို့ လိုအပ်ပါသလားဆရာ။
၃။ ကျမတူမလေးတယောက် အသက်က ၂၃ နှစ်ရှိပြီ။့့ မှာဘဲနေပါတယ်။ သူက အိမ်ထောင်ကျတာ နောက်လဆုို တနှစ်ပြည့်ပါပြီ။ သူတို့နှစ်ယောက်က တားဆေးတွေတော့ မသောက်ကြဘူးလုို့ သိရပါတယ်။ ခုဒီလမှ ကုိုယ်ဝန်ရှိပြီလုို့ မနေ့က သွေးနဲ့ဆီး နှစ်မျိုးလုံး စစ်ကြည့်တော့ သေချာသိသွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတုို့ နှစ်ယောက်က တခုစုိုးရိမ်နေကြတယ်။ သူမက ကုိုယ်ဝန်ရှိတယ်ဆုိုတာ မသိလုို့ အရင်တပတ်က မတ်လ ၂၃ ရက်လောက်မှာ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးဖုို့ဆုိုပြီး ဓါတ်မှန်ရုိုက်လုိုက်တယ်။ အဲဒီနောက်ပုိုင်းမှုာ သူမရဲ့ ဗုိုက်အောက်ပုိုင်းနာတာ ၃၊ ၄ ရက်ရှိလာလုို့ မနေ့ကမှ ဆရာဝန်ဆီ သွားပြမှ ကုိုယ်ဝန်ရှိကြောင်းသိကြတယ်။ သူတုို့ လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးက ဒီလုို ကိုယ်ဝန်စကပ်တဲ့အချိန် ဓါတ်မှန် ရုိုက်လုိုက်လုို့ သန္ဓသားက တစုံတခု ဖြစ်သွားနုိုင်မလားဆိုပြီး စုိုးရိမ်နေကြတယ်။ ဒါကြောင့် ဓါတ်မှန်ရုိုက်လုို့ အန္တရယ် ရှိမရှိ သိချင်ပါတယ်ဒေါက်တာ။
၄။ ဆရာ့ဆောင်းပါးတွေထဲဖတ်ရတာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် x- rays ဓာတ်ရောင်ခြည် မရိုက်သင့်ဘူး 2D ultrasound တို့ 3D 4D ရိုက်တာကိုတော့ ခုချိန်ထိ ဆိုးကျိုးကြီးကြီးမားမား ပြောကြတာမရှိသေးဘူး၊ (ကလေးအတွက် လေတို့ အပူတို့ ပိုရမယ် ယောက်ျားလေးဆို စကားပြောနှေးမယ်) လို့ ဖတ်ရပါတယ်။ goole ထဲမှာရှာကြည့်တော့လဲ နိုင်ငံခြားမှာ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သုံးနေကြလို့ လက်ခံယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့ ဆေးကုမ္ပဏီတစ်ခုကဖြန့်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အားဆေးကြော်ငြာ fb page တစ်ခုမှာ ပြောင်းပြန်တင်ထားတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အနေနဲ့ သွားခံတွင်း ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ရမယ့်အကြောင်းနဲ့ ဒီအတွက် x-rays ပါရိုက်ထားသင့်ကြောင်း ကျမကပြန်ချေပတော့ gender ကြိုသိဖို့နဲ့ 3d 4d ultrasound သာ မရိုက်သင့်ကြောင်း ပြန်ရေးထားပါတယ်။ ဆေးပညာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး လုံးဝတလွဲ ဖြစ်နေတဲ့ message မျိုး မပေးသင့်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ဆရာရောဘယ်လို ထင်မြင်ပါသလဲ။
လေဆိပ်သုံးလူကိုစစ်ဆေးတဲ့ကိရိယာက ဓါတ်ရောင်ခြည်နည်းနည်းလေးသာသုံးပါတယ်။ လူဖြတ်လျှောက်ရတဲ့ Metal detectors မှာတော့ Low-frequency electromagnetic field လျှပ်စစ်-သံလိုက်ဖြစ်တယ်။ အဲဒါကတော့ X-rays ဓါတ်မှန်မဟုတ်ပါ။ Luggage X-ray machines လပ်ဂေ့ကိုစစ်တာမှာတော့ ဓါတ်မှန်သုံးတယ်။ အမေရိကန် လေဆိပ်တွေမှာတော့ ကိရိယာသစ်သုံးတယ်။ တခုကို backscatter machine ခေါ်တယ်။ low-level X-rays ဓါတ်မှန် အပျော့စားပါတယ်။ အန္တရာယ်မရှိပါဘူးလို့ Transportation Safety Administration (TSA) အာဏာပိုင်တွေက ဆိုပါတယ်။ ရင်ပတ်ဓါတ်မှန်ထက် ၁ဝဝဝ ပုံ ၁ ပုံသာသုံးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါဟာ high-altitude flight အမြင့်မှာ ပျံသန်းရတာ ၂ မိနစ်စာနဲ့ ညီပါသတဲ့။ နောက်တခု Millimeter wave machine ကတော့ Electromagnetic waves လျှပ်စစ်-သံလိုက်လှိုင်းသုံးတယ်။
ဓါတ်မှန်ကနေ သီအိုရီအရ နောင်တချိန်မှာကင်ဆာ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ဒီအန္တရာယ်က နည်းပါတယ်။ Health Protection Agency (HPA) ရဲ့တွက်ချက်မှုက ဒီလိုရှိပါတယ်။ ရင်ပတ်၊ သွား၊ လက်၊ ခြေတွေကိုရိုက်တဲ့ X-ray ဓါတ်မှန်မှာ နောက်ခံ ဓါတ်ရောင်ခြည် ရက် အနည်းငယ်စာနဲ့ညီပြီး ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေ ၁,ဝဝဝ,ဝဝဝ မှာ ၁ ထက်နည်းမယ်။ ဦးခေါင်းနဲ့ လည်ပင်း X-ray ဓါတ်မှန်မှာ နောက်ခံဓါတ်ရောင်ခြည်ရက်သတ္တပါတ်အနည်းငယ်စာနဲ့ညီပြီး ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေ ၁ဝဝ,ဝဝဝ ကနေ ၁,ဝဝဝ,ဝဝဝ မှာ ၁ ရှိနိုင်တယ်။ တင်ပါး၊ တင်ပါးဆုံ၊ ခါးရိုး၊ ဗိုက်နဲ့ ရင်သား မင်မိုဂရမ် X-ray (mammogram) တွေဟာ နောက်ခံ ဓါတ်ရောင်ခြည် တနှစ်စာနဲ့ညီမျှပြီး ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေ ၁ဝ,ဝဝဝ ကနေ ၁ဝဝ,ဝဝဝ မှာ ၁ ရှိနိုင်တယ်။ Barium meal လို အဖြူရောင်မြင်ရအောင်သုံးတဲ့ဆေးနဲ့ X-ray ရိုက်ရင် နောက်ခံဓါတ်ရောင်ခြည် နှစ်အနည်းငယ်နဲ့ညီမျှပြီး ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေ ၁,ဝဝဝ ကနေ ၁ဝ,ဝဝဝ မှာ ၁ ရှိနိုင်တယ်။ ယူကေနိုင်ငံမှာ လူ ၃ ယောက်မှာ ၁ ယောက်ဟာ ကင်ဆာ တမျိုးမျိုးရှိတယ်။ ဒါလဲ ဓါတ်မှန်ကြောင့်လို့ မပြောနိုင်ပါ။ ကင်ဆာဖြစ်ဘို့ဆိုတာ အချက်တွေအများကြီးကိုပါ ထည့်တွက်ရတယ်။ ဥပမာ အသက်အရွယ်၊ လူနေမှုပုံစံ၊ မျိုးဗီဇ စတာတွေပါတယ်။
ကနေ့ ကျောင်းမှာ စပါယ်ရှယ်အီးဗင့်ရှိတယ်။ တလမှာ အဲလိုဟာ ၂ ခုရှိတာ။ ဒီလအတွက် သင့်စ်ဂစ်ဗင်းနေ့ကတခါ။ ကနေ့တော့ အင်ဒီယာနာပုလစ်မြို့ မြို့တော်ဝန်ရုံးက လာဟောပြောတယ်။ သူတို့ဘာအကူအညီပေးနိုင်သလဲ ရှင်းပြတယ်။ အိမ်လခ၊ ရေ-မီး-ဓါတ်ငွေ့ ဘီလ်၊ ကျန်းမာရေးအာမခံ အခက်အခဲရှိသူတွေကို နည်းလမ်းရှာပေးမယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အမှိုက်စည်းကမ်းမကျစွန့်ထားတာတွေ့ရင်၊ လူသွားလမ်းပေါက်ပျက်နေတာတွေ့ရင်၊ လမ်းမီး မလာတာတွေ့ရင်၊ ပေါင်းမြက် မရိတ်တာတွေ့ရင်စသဖြင့် တိုင်ကြားဘို့ ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ ဝဘ်ဆိုက်ပေးတယ်။
ဒီက သုတလေးတွေသိဘို့ တင်ပြပါတယ်။
ဆရာ ကျန်းနဲ့ ကျမ်း။ ဥပမာ ကျန်းမာနဲ့ ကျမ်းမာအကြောင်း သိချင်ပါတယ်ဆရာ။
ကျမ္မာလို့ အရင်ကရေးခဲ့တာရှိတယ်။ စာလုံးအဆင့်တွေအသုံးများစဉ်ကဖြစ်တယ်။ အဲဒီခေတ်မှာ ပါဠိကို အသုံးများခဲ့လို့ မြန်မစာလုံးအစစ်တွေမှာပါ အဆင့်တွေနဲ့ရေးကြတယ်။ သ္ခင်၊ ယ္ခင်၊ ယ္ခု၊ ကျမ္မာ၊ မင်းသ္မီး၊ မြမ္မာ၊ မိမ္မ၊ ဆုမ္မ၊ စသည်။ အဲတာတွေကို မဆင့်တော့ပဲ ခွဲရေးတာဟာ ပိုရှင်းလင်းပြီး အဓိပ္ပါယ်လည်း မပျက်စေလို့ သင့်မှန်တယ်။
အဲဒီခေတ်မှာပဲ မြန်မာစာလည်း မဟုတ်၊ ပါဠိလည်းမဟုတ်တဲ့စကားလုံးတွေမှာပါ အဆင့်နဲ့ရေးကြတယ်။ ဥပမာ အင်္ဂလိပ်၊ အိန္ဒိယ၊ ပါကစ္စတန်၊ သီရိလင်္ကာ၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ အစ္စရေး၊ ဣသရေလ၊ စသည်။ အဲတာတွေကို အဆင့်မပါဘဲရေးလည်း သတ်ပုံပျက်စရာမရှိပါ။
နောက်မှာ အဆင့်စာလုံးတွေနည်းလာပြီး ကျန်းမာလို့သာရေးလာကြတယ်။ အခု အများသုံးစံကိုက်စာလုံးက ကျန်းမာလို့ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ မင်္ဂလာပါ ဆရာခင်ဗျား။ ကျနော့ သမီး ငါးနှစ် နှစ်လ အရွယ်ပါဆရာ။ လည်ပင်းအကျိတ်ကို တီဘီကျိတ်အဖြင့် ဆေးစာထွက်ပါပြီ ဆရာ။ ကျနော် သိချင်တာလေးက တီဘီအကျိတ် ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းအရင်းနှင့်ကူးစက်ရောဂါ ဟုတ်မဟုတ်ပါဆရာ။ ကူးစက်လွယ်တယ်ဆိုရင် စာသင်ကျောင်းကို မပေးသွားဖို့ပါဆရာ။ ပြီးတော့ မွေးကင်းစမှ ယခုအရွယ်အထိ သက်ဆိုင်ရာ ကာကွယ်ဆေးများ ပုံမှန်ထိုးပါတယ်ဆရာ။ တီဘီအကျိတ်က ထိုးထားသော ကာကွယ်ဆေးအမျိုးအစားထဲမှာ ပါဝင်မှု ရှိမရှိကို သိရှိလိုပါတယ် ဆရာခင်ဗျာ။ (ကူးဆက်သတ်ပုံကို ပြင်လိုက်တယ်။)
၂။ တခုလောက်မေးချင်လို့ပါဆရာ။ သမီးအမေက လည်ပင်းမှာ အကျိတ်ပေါက်နေတာ တလကျော် နှစ်လလောက်ရှိပါပြီ။ အဲဒါနဲ့ ဆေးခန်းပြ ဆေးစစ်ကြည့်တာ xray, ultrasound နဲ့ သွေးစစ်ကြည့်တာ ဘာမှမတွေ့လို့ အဲဒီအကျိတ်ကနေ အသားစယူပြီး စစ်ကြည့်တာ တီဘီအကျိတ်လို့ အဖြေထွက်ပါတယ်။ fb မှာလည်း အမျိူးမျိုးတွေ့နေရတော့ တီဘီမဟုတ်ဘဲ တီဘီဆေးတွေသောက်ပြီး ဒုက္ခရောက်မှာ စိုးရိမ်လို့ပါဆရာ။ အမေကအသက် ၅၇ ပါဆရာ။ ချောင်းဆိုးတာတို့ ဘာတို့တော့ မရှိပါဘူးရှင့်။ အညော်မိရင်တော့ အဲဒီအကျိတ်နေရာက တင်းလာပြီး နည်းနည်းနာသလိုလို ဖြစ်တယ်လို့တော့ ပြောပါတယ်ဆရာ။ ကူညီပြီးဖြေကြားပေးပါဦးနော်။ ဆရာ့ရဲ့ အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေကိုလည်း သိပါရစေရှင့်။
ဘိုင်အော့်ပစီ ခေါ် အသားစဖြတ်ယူစစ်ဆေးတာထက် မှန်တာ မရှိပါ။ ဖေ့စ်ဘွတ်အဖြေတွေထက် မှန်တယ်။
13. TB Medicines Side Effects (တီဘီ) ဆေးတွေ နဲ့ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေ http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2012/04/side-effects-of-tb-medicines.html
15. TB Q and A (တီဘီ) အမေး-အဖြေ (၁) http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2012/09/tb-q-and.html
16. TB Q and A (တီဘီ) အမေးအဖြေ (၂) http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2014/01/tb-questions.html
21. Tuberculin test (တီဘီ) အတွက် (ကြူဘာကူလင် တက်စ်)http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2013/10/tuberculin-test.html
၁။ ဆရာခင်ဗျာ WY နှင့်ပတ်သက်သောစာများ ပညာပေးရေးသားလိုပါသဖြင့် ဆရာရေးသားထားသော post များကို ဖတ်ရှုလိုပါသည်။ ဖတ်ဖူးသော်လည်း ပြန်လည်ရှာဖွေရ ခက်ခဲနေသဖြင့် အဆင်ပြေမည်ဆိုလျှင် link လေးတွေ ပြပေးစေလိုပါသည်။ ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်။
၂။ မင်္ဂလာပါဆရာရှင့်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခုခေတ်စားနေတဲ့ ရာမ မြင်းဆေး wy တို့ရဲ့ effect က အိမ်မှာအတူနေတဲ့ ကလေးငယ်လေးကို အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပြသာနာတွေဖြစ်စေပါသလားရှင့်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာရှင့်။
1. Advice for girls and women (1) လူလုံးမလှယူကြုံးမရ မဖြစ်ရအောင် (၁) http://doctortintswe.blogspot.com/2016/01/advice-for-girls-and-women_13.html
2. Alcohol – How to quit အရက်ဘေးက ဝေးကြပါစေ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2014/04/alcohol-how-to-quit.html
3. Alcohol (1) အရက်ဋီကာ အတိုအထွာ http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2013/04/blog-post_15.html
4. Alcohol (2) အရက်ဋီကာချဲ့ခြင်း http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2013/04/blog-post_9265.html
5. Alcohol abuse အရက်ဘေးက ဝေးကြပါစေ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/01/alcohol-abuse.html
6. Alcohol and breastfeeding နို့တိုက်မိခင်နဲ့အရက် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/09/alcohol-and-breastfeeding.html
7. Alcohol and Coffee အရက်မူးတာကို ကော်ဖီကထူးစေသလား http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2013/06/blog-post_14.html
8. Alcohol and Depression အရက်က စိတ်ကျစေတယ် http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2011/01/alcohol-and-depression.html6. Alcohol and Liver အရက်သောက်ကြတာကနေ အသည်းကိုဘယ်လိုဆိုးစေသလဲ
9. Alcohol and Liver နှစ်သစ်ကူးကာလ အရက်သောက်ကြတာကနေ အသည်းကိုဘယ်လိုဆိုးစေသလဲ
10. Alcohol and pregnancy အရက်နဲ့ကိုယ်ဝန် https://doctortintswe.blogspot.com/2020/02/alcohol-and-pregnancy.html
11. Alcohol taxes and public health အရက်ခွန်နဲ့ ကျန်းမာရေး http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2011/11/alcohol-taxes-and-public-health.html
12. Alcohol withdrawal syndrome အရက်ဖြတ်လိုက်ရင် http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2013/08/alcohol-withdrawal-syndrome.html
13. Alcoholic beverage သောက်စရာအရက် http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2014/03/alcoholic-beverage.html
14. Alcoholism အရက်အတွက် ခက်နေသူတွေ http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2012/08/alcoholism.html
15. Amphetamines (1) ယာဘ-ရာဘ-ရာမ-ယာမ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/amphetamines-1.html
16. Amphetamines (2) ရာမ ဇာတ်လမ်းတခု http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/drugs-used-in-military.html
17. Amphetamines စိတ်ကြွဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/amphetamines.html
18. Burundanga ပဒိုင်းပွင့်လိုဆေး https://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/burundanga.html
19. California nuns fight ban on marijuana businesses ဆေးခြောက်နှင့် သီလရင် https://doctortintswe.blogspot.com/2016/02/california-nuns-fight-ban-on-marijuana.html
20. Carfentanyl ဆင်ဖြူတော် မူးယစ်ဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2017/02/carfentanyl.html
21. Common Medicines you really shouldn’t mix with Alcohol အရက်နဲ့တွဲရန်မသင့်သောဆေးများ
22. Cough Syrup Addiction ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးစွဲခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/cough-syrup-addiction.html
23. Date Rape Drugs သတိလစ်စေရန် ပြုလုပ်နိုင်သည့်ဆေးဝါးများ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/date-rape-drugs.html
24. Dirty Medicines ညစ်ညမ်းဆေးတွေ http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2014/01/dirty-medicines.html
25. Drug Abuse ဆေးဝါးတလွဲသုံးခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/drug-abuse.html
26. Drugs and politics ဆေးတန်ခိုးနဲ့ ဟီးရိုးဖြစ်နိုင်တယ် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/drugs-and-politics.html
27. Drugs used in the military စစ်သုံးဆေးများ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/amphetamines-2.html
28. Ecstasy Drug Tests စိတ်ကြွဆေး ဆေးစစ်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/ecstasy-drug-tests.html
29. Ecstasy စိတ်ကြွဆေးများ https://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/ecstasy.html
30. Fake alcohol အရက်တု http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/fake-alcohol.html
31. Guidance for girls and women သင်္ကြန်တွင်းကြယူကြုံးမရ မဖြစ်ရအောင် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/advice-for-water-festival.html
32. High မူးယစ်ဆေးများ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/07/high.html
33. How to lessen the effects of Alcohol အရက်မူးတာ သက်သာအောင် http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2012/12/how-to-lessen-effects-of-alcohol.html
34. Ice ဆိုတာ ရေခဲမဟုတ်ပါ https://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/ice.html
35. Inhalant abuse လမ်းဘေးဆေးရှူ https://doctortintswe.blogspot.com/2015/01/inhalant-abuse.html
36. Lady coffee လေဒီကော်ဖီ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/dirty-drugs.html
37. Marijuana addiction ဆေးခြောက်က စွဲသလား https://doctortintswe.blogspot.com/2017/09/marijuana-addiction.html
38. Marijuana ဆေးခြောက် https://doctortintswe.blogspot.com/2016/05/marijuana.html
39. Methadone မက်သဒုံး https://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/methadone.html
40. Methamphetamine (မက်သမ်ဖတမင်း) http://doctortintswe.blogspot.com/2017/03/methamphetamine.html
41. Military and Crystal Meth စစ်တပ်နဲ့ စိတ်ကြွဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/military-and-crystal-meth.html
42. Molly လူငယ်တွေ သုံးနေကြတဲ့ စိတ်ကြွဆေး မော်လီဆေးပြား ပိုဆိုးဝါး http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/molly.html
43. Non-alcoholic beverage အရက်မပါ သောက်စရာ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/non-alcoholic-beverage.html
44. Opium ဘိန်း https://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/opium.html
45. Predatory Drugs သတိလစ်စေရန်ပြုလုပ်နှိင်သည့် ဆေးဝါးများ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/predatory-drugs.html
46. Pseudoephedrine (ယာဘ) ကို ဒါကနေလုပ်တယ် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/pseudoephedrine.html
47. Rape drugs အဓမ္မကျင့်ဘို့သုံးကြတဲ့ ဆေးတွေ http://doctortintswe.blogspot.com/2017/03/rape-drugs.html
48. Rohypnol ရိုဖီနောလ် မုဒိန်းဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2017/03/rohypnol.html
49. Smoking and Cancer ဆေးလိပ်နဲ့ ကင်ဆာ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/smoking-and-cancer.html
50. Smoking Quit Tips ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန် အမြန်အကြံပြုချက်များ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/smoking-quit-tips.html
51. Warning to girls and women အမျိုးသမီး-မိန်းကလေးတွေ သတိပေးပါရစေ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/warning-to-girls-and-women.html
52. Water Festival and Alcohol http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/water-festival-and-alcohol.html
53. Yaba ယာဘ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/yaba.html
မင်္ဂလာပါ ဆရာတို့ မိသားတစုလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ချမ်းသာပါစေ။ ဆရာခင်ဗျား မနေ့ညက အမေလူထုဒေါ်အမာရဲ့ မွေးနေ့ (၁၀၂) နှစ်ပြည့်ကို ရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဗျ။ စာရေးဆရာမ မဝင့် (မြစ်ငယ်) ကို အမေလူထုဒေါ်အမာက (ပရုစင်) ဖို့ဆိုတဲ့စကားကို ပြောခဲ့တာကို ကြားသိခဲ့ရလို့ပါ။ (ပရုစင်) တယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်လေးကို ကျေးဇူးပြု၍ ရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ်ဗျ။ (ပရုစင်) စာလုံးပေါင်း မမှန်ခဲ့ရင်လဲ ပြင်ပေးစေချင်ပါတယ်ဗျ။
ပရုဆိုတာ Proof ကို အသံထွက်ယူတာဖြစ်ပါမယ်။ အရင်က စာအုပ်တိုက်တိုင်း၊ သတင်းစာတိုက်တိုင်းမှာ ပရုအယ်ဒီတာလို့ ထားကြရတယ်။ တခြားအယ်ဒီတာတွေက စာရဲ့ အာဘော်၊ အချက်အလက်နဲ့ ဆင်ဆာလွတ် မလွတ်ကြည့်တယ်။ ပရုဖ်အယ်ဒီတာက သတ်ပုံစစ်တယ်။ နောက်ဆုံးသတ်သူသဘောဖြစ်တယ်။ ကွန်တော်က အတိအကျသိတဲ့သူတော့ မဟုတ်ပါ။
Proof-editing လို့ရှိတယ်။ အွန်လိုင်းမှာစာတင်တဲ့ ဒီဂျစ်တယ်လ်ခေတ်မှာလည်းထားတယ်။ သူများတိုင်းပြည်တွေမှာ Proofreading & editing services ဝန်ဆောင်မှုတွေရှိတယ်။ Proof ပရုဖ်ဆိုတာ Manuscript ခေါ် စာမူကို ချရိုက်ထားပြီးသားစာကို စစ်ဆေးထားတဲ့စာခေါ်တယ်။ လူအမှား၊ စက်အမှားရှိတတ်တယ်။ အဲတာကို စစ်ဆေးရတယ်။ အဲလိုစစ်ပြီးရင် စာရိုက်သူနဲ့ ဂရပ်ဖ်အားတစ်တို့ဆီ ပြန်ပို့ရတယ်။
Proofreading ပရုဖတ်တာနဲ့ Editing အက်ဒစ်လုပ်တာ မတူပါ။ ပရုဖတ်တာက အပေါ်ယံဆန်တယ်။ သတ်ပုံ၊ သဒ္ဒါ၊ အဖြတ်အတောက်၊ ဖေါမက် ခေါ် ပုံစံဖွဲ့တာတွေကိုသာ စစ်ဆေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲလိုလုပ်တာက နောက်ဆုံးအဆင့် ဖြစ်တယ်။ တခြားအယ်ဒီတာတွေက စစ်ဆေးပြီးမှသာ လုပ်တယ်။
မေးခွန်းပါ ပရုစင်ကို သိပ်တော့ မသိပါ။ ပရုဖတ်ထားပြီးသား အမှားအယွင်းကင်းစင်တာလား စဉ်းစားကြည့်ပါတယ်။ ထပ်ပြောပါရစေ။ ကျွန်တော်က စာနယ်ဇင်းလောက၊ မီဒီယာလောကကို နည်းနည်းလေးမှ မသိပါ။ ကျွန်တော်ပြောတာ မှားနိုင်တယ်။
ဆရာရှင့် ကျမ အသက် ၃၆ နှစ်ပါရှင့်၊ သား နှစ်ယောက်ရှိပါတယ် အငယ်လေးက ၁၀ ထဲမှာပါ၊ ဗိုက်ခွဲပြီးမွေးထားတာပါ၊ ပလပ်လန် အိပ်ပြီးနည်းနည်းကြာရင် ဘေးစောင်းဖို့ခက်ပါတယ် တင်ပါးက မရွှေ့နိုင်ပါဘူး၊ မနည်းအားယူပြီးမှ ဘေးစောင်းရပါတယ်၊ ဆရာ သက်ရှည် ကျန်မာပါစေ ရှင့်
ဖြစ်တာ လူကြီးလား ကလေးလား ၂ ခါစဉ်းစားရတယ်။ ကလေးအသက် ၁ဝ ထဲဆိုတာ ၁ဝ လလား၊ ၁ဝ နှစ်လား စဉ်းစားရတယ်။ လူကြီးဆိုရင် ခွဲမွေးစဉ်က ခါးထုံဆေးလား။ အဲတာကနေလည်း ဖြစ်တတ်တယ်။ ကြာရင် ပျောက်တယ်။ Ibuprofen 200 mg တနေ့ ၂-၃ ကြိမ် သောက်နိုင်။ Low back pain စာ ဘလော့မှာဖတ်နိုင်။
၂။ ဆရာ အအေးပက်မယ် လို့ရေးတာလား၊ အအေးပတ်မယ်လို့ရေးရတာလားရှင့်။
အမှုပလပ် (ပသံ ပီသအောင်ထွက်ရ)
မီးပလပ် (အင်္ဂလိပ်စာလုံးကယူ၊ ပနဲ့လပ်အသံ ဆက်ထွက်ရ)
ဆောရီးက အင်္ဂလိပ်စာလုံးအသံထွက်ကိုယူတာဖြစ်တယ်။ အသံကိုယူရင် အသံထွက်ကို အတတ်နိုင်ဆုံး မှန်သင့်တယ်။ အတိအကျ မရတာတွေတော့ရှိတယ်။ ဒီစာလုံးမှာ အတိအကျနီးပါးရတယ်။
အာထွာဆောင်းလည်း အတူတူပဲ။ အာထွာစောင်းဆိုရင် မှားတယ်။ စသံနဲ့ ဆသံ မှားကြတာများတယ်။ ကျွန်တော် စရာဝန်မဟုတ်ပါ။ မြန်မာဆာလည်း မတတ်ပါ။
ကျွန်နော့်အသက် ၂၈နှစ်ပါ။ ခါးနာဝေဒနာ ခံစားနေရတာ ၁နှစ် ကျော်ပါပြီ။့့ နိုင်ငံကားပစ္စည်းစက်ရုံမှာ နေ့စိုင်းတပတ် ညစိုင်းတပတ် အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
နေ့ဆိုင်း ညဆိုင်းလို့ ရေးသင့်ပါတယ်။
မစဲပေါင် ကုသိုလ် နှိုးကြတယ်
ရေဒီယိုတခုရဲ့ဝဘ်ဆိုက်မှာ ဖတ်ရလို့ ပြန်တင်ပါရစေ။ လက်ျာစွန်းရောက် အမုန်းတရားတွေ ထရမ့် ဖြန့်ချီလို့ ရေးထားတယ်။ ဖြန့်ချိလို့သာရေးပါတယ်။ အရင်ကလည်း မေးတယ်။ ကျေးဇူးပါဆရာ ဖြန့်ချိ ကို ဖြန့်ချီ တို့ကိုလည်း ရှင်းပြပေးပါခင်ဗျာ။
ဖျက် နဲ့ ဖြတ် မှားရေးမေးကြတယ်။ ဆေးဖျက် မဟုတ်။ ဆေးဖြတ်လို့ ရေးရတယ်။
၁။ အသက် ၂၇၊ အမျိုးသမီး ကိုယ်ဝန်ယူဖို့ ဆေးဖျက်ထားတာပါရှင်။ ဘာအားဆေးတွေသောက်သင့်လဲ။
မေးနည်းပို့ပြီး။ အချက်အလက် လိုတာမပြောလိုသူတွေအတွက် ဘလော့လင့်ပေးထား။
၂။ ဆရာ ကျွန်မအသက်က ၂၀ ပါ။ အိမ်ထောင်ကျတာ ၂ နှစ်ပြည့်တော့မယ်။ ဆေးဖျက်ထားတာ ၄လပိုင်းကပါ။ လတိုင်း ရာသီလာပါတယ်။့့
၃။ အသက်က ၂၀။ ဆေးဖျက်ထားတာ ၄လရှိပြီ။ ယခု ရာသီလာရင်း အသားစပါလာပါတယ်။့့
အရင်တကြိမ်မှာ မပြင်လိုက်ပါ။ မေးခွန်းတွေထဲမှာ ထပ်တွေ့လို့ ဆေးဖြတ်လို့ ရေးရတယ်။ ဖျတ် မဟုတ်ပါ။
၄။ အခုဆေးက ဒီလ ၁၁ ရက်နေ့မှာ ၂၈ လုံးကုန်ပါပြီဆရာ။ ကျွန်မနဲ့ သူနဲ့က့့ လပိုင်းမှ ပြန်တွေ့မှာဆိုတော့ ဆေးဖျက်ထားချင်ပါတယ်ဆရာ။
၅။ ဆရာ သမီးအသက် ၂၂ ပါ။ အိမ်ထောင်သက်တမ်း ၄ လရှိပြီ။ ပထမ ၂ လက ဆေးသောက်ပါတယ်။ နောက် ၂ လကို ဆေးဖျက်ထားတာ ခုထိကလေးမရသေးပါဘူးဆရာ။
ဆရာ ဒီနှစ်ရွာမှာ ကြက်သွန်တော်တော်ရကြတယ်။ ဈေးလဲရတယ်ပြောတယ်။ အိမ်တိုင်းမှာ ကြက်သွန်ပုံတွေ ချည်းပဲ။ သီးနှံတွေရကြတော့ အားလုံးအဆင်ပြေ ဝမ်းသာရတာပေါ့။
• ကျွန်တော့်ဇာတိရွာ အိမ်ခြေတရာမရှိ၊
• ရွာတောင်ဘက်က ယမားချောင်း၊ ကားမောင်းဘို့ခက်၊
• အုန်းလက်၊ ငှက်ပျောဖက်၊ သစ်ရွက်၊ မြက်၊ လမ်းလုပ်ဖို့အတွက် အိမ်တိုင်းက အင်ဂျင်နီယာထွက်။
• ခေါင်းရွက်သည့်အသယ်၊ ဈေးလည်ရောင်းသူအလာ စောင့်ကြရ၏။
• ခြံထွက်တဲ့ ကွမ်းရွက်၊ အခင်းထွက် အရွက်အသီး၊
• ဆီးယိုက နှစ်ပေါက်၊ မုန့်လက်ကောက်၊ မုန့်ဆီကျော်၊
• မြို့သားကျွန်တော် ရွာလည်ပြန်သော်၊ ဆရာတော့်ဆွမ်းကျန်စားပြီး စာအံ၊
• ကျောက်တံနဲ့ ကျောက်သင်ပုန်း၊ ဝလုံးကစ၊
• ဂဏန်းက ဆယ့်ခြောက်ဆယ်နှစ်လီထိ အာဂုံဆောင်ရ၊
• တက်ဘလက်ခေတ်ကျမှ အလွတ်ကျက်ရတဲ့ပညာရေး၊ ရှေးကျတယ်လို့သတ်မှတ်ခံရ၊
• ငယ်ကတည်းကစာ ခုထိပြန်အန်လို့ရ၊
• အတွေးက တောဆန်၊ အရေးကလည်း တောသံ၊ ဘာလိုလိုနဲ့ တောမပြန်ရတာကြာပြီကော။ ။
ဓါတ်ပုံ = မာန်ဟုန် ဟုန် Kyaw Hlaing Oo
ယခုအခါ ကွယ်ပျောက်သွားတဲ့ ကစားနည်းလို့ ပို့တာ အခုပဲရတယ်။ ကျေးဇူး။
Shartong Ranger Game https://www.facebook.com/rangercabunzky/videos/1730585520285496/
ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က ကျည်းသားကစားခဲ့ပါတယ်။ နှစ်နှစ်လောက် စာလေးတပုဒ်ရေးထားတယ်။ မုံရွာ ရတနာပုံကအိမ်။
• ဝါးကပ်ထရံ၊ နံရံလည်းဝါး၊ အသားခင်းအိမ်၊ ကြိမ်ကုလားထိုင်၊
• အိမ်တိုင် မျောသား၊ အင်သား တန်းလျား၊ စားပွဲ သရက်သား၊
• အိမ်နား မြေလမ်း၊ ထန်းပလပ်ခုံ၊ လမ်း ဖုန်ထူ၊ နေပူ၊ လူဝတ်စရာ ချည်ထည်သား၊
• ဝါးယပ်တောင်၊ စက္ကူယပ်တောင်၊ မင်္ဂလာဆောင်ကရ၊ အလှူကရ၊ နာရေးကရ၊
• ရွက်လှပန်းပင်၊ မာလကာပင်၊ ကြံပင်၊ အဖေစိုက်တဲ့အပင်၊ နေ့စဉ် ရေငင်လောင်း၊
• ကျောင်းပြန်ကစား၊ ကျည်းသား၊ အားရင် ဒိုးပစ်၊
• ရွာဖြစ်လက်ဆောင်၊ မပူအောင်သုံး၊ အုန်းဆံ တံမြက်စည်း၊ နှီးဆန်ခါ၊ ဖျာနဲ့ လက်သုပ်၊ မုန့်ဖက်ထုပ်၊ လက်လုပ်ချဉ်၊
• ရေငင် ပွဲ့လျက် (ပွဲ့ညှက်) သုတ်ပုံး၊ ထုံးနဲ့ ကွမ်းရွက်၊ ပြောင်းဖူးဖက်လိပ်၊
•အရိပ်အငွေ့၊ အမေ့အိမ်ဓလေ့၊ လွန်ချမ်းမြေ့၊ အကျွန် အလွန်အောက်မေ့။ ။
ကျည်းသား ကစားခဲ့ပါတယ်။ ဆော့တယ်လို့ မပြောပါ။ စည်းစနစ်ပါတယ်။
၁။ Workout လုပ်သူများအတွက် အဟာရဖြစ်စေမယ့် အစားအစာ - မင်္ဂလာပါ ဆရာရှင့်။ သမီးက ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းပါ။ မနက်ဆိုရင် ၆နာရီကျော်လောက် ထရပြီး မနက်စာကို ကတိုက်ကရိုက်စားရပါတယ်။ အများဆုံးစားဖြစ်တာကတော့ ထမင်းကြော်နဲ့ ညကဟင်းအကျန်ပြန်နွှေးထားတာမျိုးပါ။ တခါတလေ လက်ဖက်သုပ်လိုမျိုးတို့ အသုပ်စုံတို့ စားပါတယ် ဆရာ။ နေ့လည်ပိုင်းကတော့ ထမင်းဗူးဖွင့်ပြီး ကိုယ့်ဟင်း သူများဟင်း ရုံးမှာစုစားကြပါတယ်။ ရုံးက ညနေ ၅နာရီခွဲ ဆင်းတာဆိုပေမယ့် ၆နာရီလောက်မှ အလုပ်ဆင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၇နာရီလောက်ဆိုရင် Gym ကို ရောက်ပါတယ်။ ၈နာရီခွဲလောက်ထိ ဆော့ပြီး အိမ်ကိုပြန်ရောက်ရင် ၉နာရီ ကျော်ပါပြီ။ အိပ်ချိန်နဲ့ကပ်နေလို့ သမီး ညစာမစားဖြစ်ပါဘူး။ ခုနောက်ပိုင်းမှာ သမီးခေါင်းခဏခဏမူးလာတယ်ဆရာ၊ တခါတလေဆို အန်ပါတယ်။ ဆော့နေရင်းနဲ့လဲ အားကုန်နေသလိုမျိုး ခံစားရတယ်။
မဖြေခင် ခဏခဏပြောရသလို ဆော့စကားလုံးကိုပြောပါမယ်။ ကစားတာနဲ့ ဆော့တာ မတူပါ။ ဆော့တာက အစီအစဉ်မရှိ သတ်မှတ်ချက်မရှိ အချိန်ရတိုင်း ကလေးတွေဆော့တာမှာသာသုံးရတယ်။ ဂျင်မ်ထဲမှာ လေ့ကျင့်တာမျိုးလို နည်းရော အချိန်ပါ စနစ်တကျလုပ်ရတာကို ကစားတယ်လို့သုံးရပါတယ်။ မှားရေးနေသူတွေ များတယ်။ ဝန်ကြီးဌာနအမည်တောင် အဆော့ရေးရာဝန်ကြီးဌာနလို့ ပြောင်းမလားမသိ။
၂။ မင်္ဂလာပါဆရာရှင့်။ အသက် ၃၂နှစ် မ၊ အပျိုပါ။ ခြေကျင်းဝတ်နဲ့ ခြေဖ၀ါးတွေ ညောင်းညာကိုက်ခဲထုံကျင်ဝေဒနာ တနှစ်လောက်ရှိပါပြီ။ နှိပ်တာလည်း မသက်သာပါဘူး။ ခြေဖ၀ါးတွေက နာလို့ အုန်းမှုတ်ခွက်လိုမျိုးလည်းနင်းပါတယ်။ ခြေထောက် နင်းတဲ့အနှိပ်ဖုလည်းနင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မသက်သာဘူး။ ညဘက် အိပ်ရာထဲမှာလှဲရင် ခြေဖ၀ါးတွေက အပ်စူးသလိုဖြစ်ပြီး ကျင်တယ်ရှင့်။ အခုဘီဝမ်းသောက်ပါတယ်။ မသိသာသေးဘူး။ ဘားပလက်နဲ့ မယ်ဇလွန် နဲ့ တော့ မတည့်ဘူး။ ငယ်ငယ်တည်းက အကြောတက် အရိုးပျော့ပါတယ်။ ၁၀ နှစ်လောက်ထိ ဒူးနဲ့တံတောင်ဆစ်မှာ ကြာဆူးတွေရှိခဲ့တယ်။ အခု မျက်လုံး ကလည်း ပါဝါခဏခဏပြောင်းပါတယ်။ အမဲသားကလွဲ၍ အကုန်စားပါတယ်။ လူက ပေါင် ၁၃၀ အရပ်က ၅ ပေ၊ လူသာ ၀ပြီး အာဟာရချို့တဲ့သလိုဖြစ်နေတယ်။
၃။ ဆရာရှင့် ကျမ ကလေးနို့တိုက်မိခင်ပါ။ ကလေးက ၁လရှိပါပြီ။ ကျမအရွက်လုံးဝမစားပါဘူးရှင့် အသားတော့စားပါတယ်။ အရွက်မစားတဲ့အတွက် နို့ထဲမှာ ကဘေလးအတွက်လိုအပ်တဲ့ အဟာရချို့တဲ့နိုင်ပါသလားရှင့်။ အကယ်၍ ချို့တဲ့တယ်ဆိုလျှင် လိုအပ်တဲ့အဟာရကို အခြားဘယ်နည်းနဲ့ ဖြည့်ပေးနိုင်ပါသလဲရှင့်။
၄။ ဆရာရှင့် ရိုသေစွာမေးပါရစေ။ သမီး ဥပုသ်စောင့်တာက ၃ လလောက်ရှိပါပြီ။ သမီးမှာ မနှစ်ကတော့ ပိုတက်စီယမ် လျော့နည်းလို့ ဆေးရုံတက်ရဖူးပါတယ်။ မွေးရာပါ အရိုးအသားတွေ ပျော့ပါတယ်။ ငယ်ငယ်က တော့ ကြာဆူးအတွေကြီးပေါက်တယ်။ အကြောတက်ပါတယ်။ အခုက ဘယ်ဘက် ခြေထောက် ခြေဖ၀ါး ထုံကျင်နာလို့ ဆရာဝန်က neobest fitfree ဆေး ၂မျိုး ညဘက် သောက်ခိုင်းလို့သောက်တာ နောက်နေ့မနက်ကျ အရမ်းမူးလို့ fitfre မသောက်တော့ဘဲ ကယ်စီဗိုက်တာ ဖိုတီနဲ့ neobion အနီသောက်ပါတယ်။ ညဘက်အိပ်ခါနီး သောက်ခိုင်းလို့ သောက်တော့ ဥပုသ်နဲ့သောက်လို့လား မသိဘူး၊ အစာအိမ်က လေချဉ်တက်ပြီး ရင်ထဲက မအီမသာဖြစ်ပါတယ်။ တနေ့ကတော့ အန်ပြီး ဝမ်းသွားတာ ဒီနေ့ပါဆို ၃ ရက်ပါ။ အစားဝင်တာနဲ့ တန်းပြီးအန်တယ်။ ဝမ်းသွားပါတယ်။ နယ်မှာရိပ်သာဝင်နေတာ။ မနေ့က ပိုးသတ်ဆေးနဲ့ Multivitamin ချိတ်ပေးတာ၊ ချိတ်နေရင်း သွင်းတဲ့လက်က အေးစက်နေပြီး ချောင်းဆိုးချွဲကြပ်လာလို့ လက် ၃ လုံးပဲ သွင်းတာရပါတယ်ရှင့်။ လူက အားမရှိဘူး။ ပင်ပမ်း နုံးချိနေပါတယ်ဆရာ။ ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေကြားပေးပါဦးနော်။ စာကရှည်သွားလို့ခွှင့်လွှတ်ပါ။ ကျေးဇူးတင်လျက်။ အသက် ၃၁ ရှိပါပြီ။ အစားလည်းမစားနိုင်ဘဲ မအီမသာ ဖြစ်နေပါတယ်။
အသက်က နောက်ဆုံးမှရေးလို့ ပြန်ဖတ်ရတယ်။ ဥပုပ်ကို ဥပုသ်၊ ပီကို ပြီ၊ ပီးကို ပြီးနဲ့ ပင်ပမ်းကို ပင်ပန်းလို့ ပြင်လိုက်ပါတယ်။
အစားအစာဆိုတာ လုံလောက် + မျှတရတယ်။ လုံလောက်ဆိုတာ အပျိုတုံးကတမျိုး၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှာတမျိုး။ နို့တိုက်ချိန်မှာတမျိုး။ ပရိုတင်း (ပဲ + အသား-ငါး-ဥ) + အရွက် + အသီး + အဆီ + ဓါတ်ဆား + ရေ အကုန်ပါနေမှသာ ပြည့်စုံတယ်။ မျှတဆိုတာ အစားအစာတမယ်တည်း မစားရမပါ။ မလုံလောက်ရင်၊ ဆေးကူရမယ်။
အသားဓါတ်ဆိုတဲ့ ပရိုတင်းမှာ မရှိမဖြစ်တဲ့ (အမိုင်နိုအက်စစ်) တွေပါဝင်တယ်။ ပျက်စီးသွားတဲ့ (တရှူး) တွေ၊ (ဆဲလ်) တွေ အစားထိုးရန်၊ အသစ်တည်ဆောက်ဘို့ အသုံးကျတယ်။ အသား၊ ပဲ၊ ငါး၊ ဥ၊ အစေ့အဆံ၊ နို့၊ နို့ထွက် ပစ္စည်းတွေက ရတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန် ၇ဝ ကီလိုရှိသူအတွက် တနေ့မှာ ပရိုတင်း ၇ဝ ဂရမ်လိုတယ်။ (ဖိုင်ဗာ) ဆိုတာ အသီးအနှံတွေမှာပါတယ်။ မစားက ဝမ်းချုပ်စေသည်။
အမျိုးအစား စုံလင်အောင်စားရတယ်။ သင်တင့်မျှတစွာ ပါဝင်ရမယ်။ အာဟာရလိုအပ်ချက်နဲ့ ပြည့်မီရမယ်။ လိုအပ်ချက် အနည်းအတွေရှိတယ်။ အလုပ်ကြမ်းလုပ်ရသူ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေက ပို၍စားရမယ်။ သန့်ရှင်းရေးနဲ့ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ကျန်းမာသန်စွမ်းစေမယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သံဓါတ်၊ ဖေါလစ်-အက်စစ်၊ ဗီတာမင် ဘီ ၁၂၊ ဗီတာမင်ဘီအုပ်စု၊ ကယ်လ်စီယန် ဓါတ်ဆားတွေ ပေးရမယ်။ အရက်ကြောင့် အသည်းရောင်ခြင်း ဖြစ်လာမှာ (ဗီတာမင်ဆေးပြား + 40 kcal/kg + ပရိုတင်း 1.5-2 G/kg + ဖေါလစ်အက်စစ် + ဘီ ၁) တို့ပေးရတယ်။ အာဟာရနဲ့ ဆေးကုခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်။
(ကိုလက်စတီရော) ဆိုတာ အစားအစာထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ အဆီတမျိုးဖြစ်တယ်။ များရင် သွေးကြောလေးနံရံတွေမှာ လာစုလို့ သွေးကြောကျဉ်းရောဂါဝင်လာမယ်။ တိရစ္ဆာန်အဆီအရွတ်တွေမှာ ညံ့တဲ့(ကိုလက်စတီရော) ပါတယ်။ (မာဂျရင်း)၊ (ကွတ်ကီးစ်)၊ (ခရက်ကား)။ ပြောင်းဆီ၊ (ကင်နိုလာ) ဆီ၊ သံလွင်ဆီ၊ နေကြာဆီ၊ ပံပုပ်ဆီတွေမြှ ညံ့တဲ့အဆီနည်းတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့မသင့်တဲ့ဆီတွေကို (ထရန့်ဖက်) လို့ခေါ်တယ်။ ဝါစေ့ဆီ၊ ပဲပုတ်စေ့ဆီတွေကို ဟိုက်ဒရိုဂျင် ထပ်ပေါင်းထည့် လိုက်တာဖြစ်တယ်။ အသုံးခံ၊ အစားအသောက်ကလည်း အရသာထူးလာစေတယ်။ အဆိုး (LDL) နဲ့ အကောင်း (HDL) နှစ်မျိုးရှိတယ်။ အဆိုးတွေမှာ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း (စထုပ်ခ်)၊ ဆီးချို အမျိုးအစား ၂ ရနိုင်သည်။ အဝလွန်၊ အသည်း၊ ကင်ဆာ၊ အဇာမိုင်ယားရောဂါတွေလည်းဖြစ်စေတယ်။ အဲလိုပြောင်းဘို့မလိုဘဲ နွားနို့၊ အမဲ-ဆိတ်-သိုးအဆီ၊ ထောပတ်၊ မာဂျရင်းတွေမှာ (ထရန့်ဆီ) ပါနေပြီးဖြစ်တယ်။ (ဂျန့်ဖုဒ်) ဆိုတာ အလွယ်ဝယ်ယူစားသောက်နေကြတဲ့ ခေတ်ပေါ်အစာတွေကို ခေါ်တယ်။ မသင့်ပါ။
ဥပုသ်စောင့်တာနဲ့ သားသတ်လွတ်စားတာမှာ သတိထားစရာတွေရှိတယ်။ ဘုန်းတော်ကြီးတွေ သီလရှင်တွေမှာ စောင့်ထိန်းကြရတဲ့သီလတွေနဲ့ အနေအထိုင် အလုပ်အကိုင်တွေက လူဝတ်ကြောင်တွေနဲ့မတူကြပါ။ ဘာသာရေးကို ဆရာဝန်တွေကထောက်ပြရတာ ငရဲကြီးရာကျတယ်။ မတတ်နိုင်။
အမှတ်မထင် သူများတင်ထားတာတခု တွေ့လို့ပါ။ ကျွန်တော်က လက္ခဏာအကြောင်း မသိပါ။ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ကိုင်ရိုစာအုပ်တွေ ဖတ်ခဲ့ဘူးတယ်။ စာမှန်မျှ အနားရှိတာ အကုန်ဖတ်တာ။ ကံကောင်းချင်တော့ အကိုကြီးက စာအုပ်တွေ လိုက်ရှာစုတယ်။ ထင်းရှူးသေတ္တာကြီးနဲ့ အနည်းဆုံး လေးလုံးအပြည့်။
တခြားသူ မြန်မာလိုတင်ထားတာက M အမ် အရေးအကြောင်းတဲ့။ ကျွန်တော်က အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့ H အိတ်ခ်ျကို ရှာဖတ်တယ်။ X ဆိုတာလည်း ရှိသေးတယ်။
လက္ခဏာပညာရှင်တွေက လက်ဝါးပေါ်ကအရေးအကြောင်းတိုင်းရဲ့ ထူးခြားမှုတွေကို သုတေသနပြုပြီး ဆန်းစစ်လေ့လာ ဖတ်ကြားပေးကြတယ်။ လိုင်းအကုန်လုံးမှာ သီးခြားဆန်းပြားတာတွေရှိသတဲ့။ အရေးအကြောင်း တခုနဲ့တခု ဖြတ်ခြင်းတွေမှာလည်း ထူးခြားတာတွေရှိသတဲ့။
H line က အဓိကလိုင်း သုံးခုကြားမှာရှိတယ်။ အဓိကလိုင်းသုံးခုဆိုတာ ဟဒ် ခေါ် နှလုံးသား၊ လပ်ခ် ခေါ် ကံကြမ္မာနဲ့ ဟဒ် ခေါ် ဦးနှောက်ကိုခေါ်ပါသတဲ့။ အဲတာတွေနဲ့ အိတ်ခ်ျလိုင်းက ဆက်စပ်နေသတဲ့။ ဖက်ရှင်တမျိုးဖြစ်တယ်တဲ့။
အဲလိုလူဟာ ကံကြမ္မာမှာ အောင်မြင်တဲ့အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်ကြုံရပါမယ်တဲ့။ အထူးသဖြင့် အသက် ၄ဝ ကျော်ရင်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူတို့ဟာ အဲလိုအရေးပါတဲ့အချိန်ကာလမှာ ယူတန်း ခေါ် ဂငယ်ကွေ့ ကွေ့ကြတယ်။ အကောင်းဆုံးကို ဦးတည်တယ်။ အဲဒီပန်းတိုင်ဆီ ရောက်ဘို့ရာ အခက်အခဲပေါင်းများစွာကို ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဆောရီး။
ဝင်ငွေရလမ်း ရုတ်ရက်မြင့်တက်လာနိုင်တာမျိုး ရှိပါမယ်။ ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်း။ အဲဒီကာလမတိုင်မီကတော့ သူ့ရဲ့အလုပ်ကြိုးစားမှုနဲ့ စွမ်းဆောင်မှုတွေဟာ အရာမထင်ဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ ဆောရီး။ အသက် ၄ဝ ကျော်လာပြီဆိုရင်တော့ ကောင်းလာပြီတဲ့။
သူတို့သဘာဝဟာ အီမိုးရှင်း ခေါ် စိတ်ခံစားမှု ကြီးကြတယ် လွန်ကဲကြတယ်တဲ့။ သတိထားပါလေ။
သူ့အနားကလူတွေကို ကူညီတတ်ကြတယ်။ သူများဒုက္ခတွေကို ကင်းစေအောင် လုပ်ကိုင်ပေးကြတယ်။ သူ့ကို ရက်ရောသူလို့ တခြားလူတွေက အကဲဖြတ်ကြလိမ့်မယ်။ ကောင်းတယ်။
အိတ်ခ်ျလိုင်းပါနေသူဟာ ဘဝတလျှောက်လုံး အခက်အခဲတွေတော့ တပွေ့တပိုက်ကြီး ရင်ဆိုင် ကျော်လွှားရရှာတယ်။ ငယ်ရာကနေ ကြီးပြင်းလာချိန်မှာ ပိုများပါလိမ့်မယ်။ တသက်လုံး ဆန့်ကျင်သူတွေနဲ့ အမြဲရင်ဆိုင်ရတယ်။ ဆောရီး။
သူဟာ သူချစ်ခင်မြတ်နိုးသူတွေအတွက် ဘာမဆိုလုပ်ပေးလိုစိတ်ထားတယ်။ အဲလိုကူညီဘို့ရာ နှစ်ခါပြန် စဉ်းစားမနေဘူးတဲ့။ သူ့ဘက်မှာ ကံကြမ္မာက အမြဲမကောင်းမနေလည်း မျှော်လင်ချက်ကို စွန့်လွှတ်သူတော့ မဟုတ်ပါတဲ့။
အပြုသဘောတွေးမြင်တယ်။ အလွန်အလုပ်ကြိုးစားသူဖြစ်တယ်။ အဲတာ သူ့ပင်ကိုယ်သဘာဝဖြစ်တယ်။ ဉာဏ်ရည်လည်း ထက်မြက်တယ်။ အမြင်စူးရှတယ်တဲ့။ ဘာသာပြန်တာသာဖြစ်ကြောင်းပါ။ မေးတော့ မမေးကြပါနဲ့ မသိပါ။
ညကမအိပ်ခင် ဆံပင်နဲ့ဆိုင်တဲ့စာတွေတင်တယ်။ ဒီတပုဒ်တော့ မတင်ခဲ့ပါ။ အခု တင်ရတော့မယ်။
မင်္ဂလာပါဆရာ။ သမီးအကူအညီလိုအပ်တယ်ထင်လို့ပါ။ hair loss in women post လေးဖတ်ရပါတယ်။ ခုဖြစ်နေတာက တကိုယ်လုံးပုံမှန်ထက် အမွေးတွေသန်လာလို့ပါ။ အသက် ၂၈ နှစ်ပါ။ ဆံပင်အရမ်းကျွတ်တာကြောင့် နာမည်
လည်းကြီး ကြော်ငြာအားလည်းကာင်းတဲ့ aesthetic clinic တခုမှာ ဦးရေပြားဆေးထည့်ပေးတဲ့ Mesotheraphy ကို တပတ်တခါ ၆ ကြိမ်ခံယူခဲ့ပါတယ်။ ရပ်လိုက်တာ ၅ ပတ်ကျော်ပါပြီ။ သောက်ဆေးလဲပေးပါတယ် ဘာဆေးလဲမေးတော့လဲ တိတိကျကျ မဖြေပါဘူး။ သတိထားမိလာတာ မျက်နှာတခုလုံးကအစသိသိသာသာ အမွေးတွေရှည်လာတာပါ။ ဆေးခန်းမှာပြောတော့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနေနဲ့ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဘဲ ပြောပါတယ်။ ကြိုတင်သတိပေးထားခြင်းလဲမရှိပါဘူး။ ဘေးလူတွေပါ သတိထားမိအောင် အမွေးတွေသန်လာရှည်လာတာပါ။ ဆေးခန်းက မျက်နှာကို IPL hair removing လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ လက်တလောအဆင်ပြေအောင် လုပ်လိုက်ပါတယ်။ ခုလုပ်ထားတာ ၁ လနီးပါးရှိပါပြီ။ ဘာဆက်လုပ်သင့်သလဲနဲ့ ဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုတာကို ညွှန်ကြားပေးပါရှင်။ ကျော ပခုံးကအစ မြင်သာထင်ရှားနေတော့ အရှက်ရနေလို့ပါ။
ဆရာအဆင်ပြေတဲ့အချိန် ဖြေကြားပေးစေလိုပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
၂။ မင်္ဂလာပါဆရာ သမီးအသက်က ၃၀ ပါ။ ငယ်ငယ်ကတည်းက လက်တွေ ခြေထောက်တွေမှာ အမွေးတွေရှိပေမယ့် အခု နှုတ်ခမ်းမွေးတွေပါပေါက်လာတယ်ဆရာ။ မိန်းကလေးတယောက်က မျက်နှာမှာ နှုတ်ခမ်းမွေးတွေပေါက်နေတာဟာ တကယ်ကို အမြင်ဆိုးလှပါတယ်။အဲဒီဟာကြောင့်ပဲ စိတ်ဖိစီးမှုလည်း ဖြစ်တယ်ဆရာ။ရိတ်လိုက်ရင်လည်း ပိုသန်လာမှာ စိုးတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရင် ကောင်းမလဲ ဆရာ့အကြံဉာဏ်လေးသိပါရစေ။
၃။ မင်္ဂလာပါဆရာ။ ကျွန်တော်နှာခမ်းမွေးအရမ်းထူအရမ်းများပြီး မများအောင် မထွက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆရာ။
၄။ ကျွန်တော့ အသက် ၃၅ နှစ်ရှိပါပြီ၊ နှုတ်ခမ်းမွေး ကျိုးတို့ကျဲတဲသာ ပေါက်ပါတယ်။ အဲဒါ နှုတ်ခမ်းမွေး သန်သန်မာမာ ပေါက်ချင်လို့ပါ။ ဘာလုပ်ရမလဲခင်ဗျာ။
ခန္ဓာကိုယ်မွေးဆိုတာ ကိုယ်ဝန် ၁ဝ ပါတ်လောက်မှာကတည်းက စခဲ့တယ်။ ၅ လ အရွယ်ရှိရင် အမွေးအိတ် အရေအတွက် ၅ သန်းရှိနေပြီ။ နောက်ထပ် ဖြစ်မလာတော့ပါ။ ကျား-မ အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ပျက်စီးသွားတာတွေသာ ရှိလိမ့်မယ်။ အမွေးဆိုတာ ကိုယ်အပူချိန်ထိန်းရာမှာ အသုံးကြတယ်။ နို့တိုက်သတ္တဝါတွေရဲ့ ထူးခြားမှုလဲ ဖြစ်တယ်။ ဝန်ရိုးစွန်းဒေသမှာ နေတဲ့ အကောင်တွေ ကြည့်ပါလား။ နှုတ်ခမ်းမွေးနဲ့ လိင်အင်္ဂါတဝှိုက်က ဆီးစပ်မွေးတွေကတော့ အာရုံကြောတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေလို့ အာရုံခံအင်္ဂါများသဘောဆောင်ကြတယ်။ ထိတာ ကလိတာနဲ့ စိတ်ကို တမျိုးတမည် ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ဟော်မုန်းများလာတဲ့ အရွယ်ရောက်ချိန်မှာ ဆီးစပ်မွေးက အစဦးဆုံးပေါက်လာတယ်။ ယောက်ျားလေးတွေဆိုရင် ပိုသိသာတယ်။ မျက်နှာ၊ ရင်ပတ်၊ ဗိုက်၊ ပေါင်၊ ခြေထောက်၊ လက်မောင်း နေရာတွေမှာပါ များလာတယ်။ အရွယ်ရလာရင် အမွေးတွေ ရင့်-သန်-များ လာတယ်။
လူတွေမှာ ဆံပင်၊ Vellus hair ကိုယ်မွေးနု၊ ထူးခြားတဲ့အမွေးတွေဆိုပြီး သုံးမျိုးရှိတယ်။ နှုတ်ခမ်း၊ လက်ဖဝါး၊ ခြေဖဝါး၊ နားနောက်၊ ချက်၊ လိင်အင်္ဂါနေရာတချို့နဲ့ အမာရွတ်နေရာတွေက လွဲရင် အဲဒီအမွေးသုံးမျိုးထဲက တမျိုးမျိုးပေါက်နေတယ်။ အထူအပါးတော့ မတူခြားနားကြတယ်။ အရွယ်ရောက်ချိန်လောက်စပြီး ကိုယ်ခန္ဓာမှာပေါက်လာတဲ့ အမွေးတွေက Androgens အင်ဒရိုဂျင်ဆိုတဲ့ ကျားဟော်မုန်းနဲ့ ဆက်စပ်နေလို့ အင်ဒရိုဂျင်မွေးလို့လဲ ခေါ်တယ်။ ဒီဟော်မုန်းက ကျားရော မ, ပါရှိကြပေမဲ့ ယောက်ျားတွေမှာ ပိုများတယ်။ ဆံပင်ကလဲ အင်ဒရိုဂျင်ကို လိုက်ပြီး များတာ၊ ထူတာရှိတယ်။ မျိုးဗီဇက အထူ-အပါး၊ အနဲ-အများနဲ့ အရောင်၊ အမျိုးအစား ကိုပါ အများကြီး လွှမ်းမိုးတယ်။ အာရပ်တွေ ကုလားတွေက အမွေးလဲများ၊ အမွေးလဲ ကြိုက်ကြတယ်။
Minoxidil ဆေး၊ Anabolic steroids ဆေး၊ Testosterone ဆေးနဲ့ Cyclosporine ဆေးတွေကနေလည်း ကိုယ်မွေး များစေနိုင်တယ်။ အမွေးများတာကို Hirsuitism ခေါ်တယ်။ မိသားစုလိုက်နိုင်တယ်။ အမျိုးသမီးတွေ မျက်နှာ၊ ရင်ပတ်၊ ဗိုက်တွေမှာ အမွေးများနေရင် ကျားဟော်မုန်းတွေ လိုတာထက်များနေလို့ပါ။ ဂရိ၊ အီတလီနိုင်ငံသူတွေက တခြား မိန်းမတွေထက် အမွေးများကြတာ ပုံမှန်ပါ။ အမျိုးသမီးတွေမှာ အမွေးများတာနဲ့အတူ ဝက်ခြံပေါက်တာ၊ ရာသီမမှန်တာ၊ ကလေးမရနိုင်တာတွေပါ တွဲနေတတ်တယ်။ ၄ဝ%လောက်မှာ (အဒြီနယ်) အိတ်ကနေထွက်မဲ့ ကျားဟော်မုန်းများတာက (အင်ဇိုင်း) တမျိုး နည်းနေလို့ ဖြစ်တယ်။
တချို့လူတွေမှာ ဆီးချိုထိန်းဆေး အင်စူလင်ကို ခံနိုင်ရည်ဖြစ်နေလို့ မျိုးဥအိမ်၊ (အဒြီနယ်) နဲ့ သရက်ရွက်တွေ အလုပ် လုပ်တာ ထိခိုက်စေတယ်။ အမွေးများသူတွေကို Androgen ဟော်မုန်း ဆန့်ကျင်ဆေး Spironolactone နဲ့ Aldactone ပေးတတ်တယ်။ Proscar ဆေးက အသစ်ဖြစ်တယ်။ ဒီဆေးတွေပေးရင် သွေးစစ်နေရမယ်။ Cortisone ပေးကုတယ်။ မျိုးဥအိမ်ကနေဖြစ်ရတာဆိုရင် ကိုယ်ဝန်တားဆေး ပေးကုနိုင်တယ်။ ဆေးအမျိုးအစား ရွေးဘို့တော့ လိုတယ်။ ဥရောပမှာ Diane or Dianette ဆေးတွေ သုံးတယ်။ Ethinyl estradiol နဲ့ Cyproterone acetate တွေပါတယ်။
မွေးရာပါ Hirsutism ဆိုတာကြတော့ အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးတွေမှာ ရင်ပတ်နဲ့ ကျောဘက်မှာ အမွေးတွေများတာကို ခေါ်တယ်။ တလွဲဆံပင်ကောင်းသူတွေပေါ့။ တချို့မှာ ကင်ဆာရောဂါနဲ့ တွဲနေတတ်တယ်။ Minoxidil ဆိုတဲ့ ဆံပင်ပေါက်ဆေးကြောင့် ကွက်ပြီး အမွေးတွေ များလာတတ်တယ်။ မွေးရာပါ Hypertrichosis ရှိသူ ခုထိ အလယ်ခေတ်ကတည်းက ရေတွက်တာ လူပေါင်း ၁ဝဝ တောင် မရှိသေးဘူးတဲ့။ မွေးရာပါဆိုရင် ကုမရပါ။ Hypertrichosis ဆိုတာက ကိုယ်ခန္ဓာမှာ အမွေးတွေ ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ များလွန်းနေတဲ့ အခြေအနေကို ခေါ်တယ်။
Petrus Gonzales မိသားစုက ၁၇ ရာစုမှာ အစောဆုံး မှတ်တမ်းတင် ခံရတယ်။ Fedor Jeftichew ကို Jo-Jo the Russian Dog Faced Boy ခွေးမျက်နှာနဲ့လူလို့ ခေါ်တယ်။ Stephan Bibrowski ကို Lionel the Lion-Faced Man ခြင်္သေ့မျက်နှာနဲ့လူလို့ ခေါ်တယ်။
Hypertrichosis အမွေးများခြင်းကို Ambras syndrome လို့လည်းခေါ်တယ်။ တကိုယ်လုံး ထူးထူးခြားခြား ကိုယ်မွေး များလွန်းတာကိုတော့ Werewolf syndrome လို့ခေါ်တယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာ PCOS မျိုးဥအိမ်မှာ အကျိတ်လေးတွေ အများအပြားရှိနေရင်ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဝကြတယ်။ adrenal cancer ကင်ဆာ၊ adrenal tumors အကျိတ်၊ congenital adrenal hyperplasia ရောဂါနဲ့ Cushing disease ရောဂါ တွေနဲ့တွဲနေမလား စစ်ဆေးရမယ်။
ဖြစ်စေတဲ့ရောဂါကို ကုသရမယ်။ anti-androgen ဆေးနဲ့ ကိုယ်ဝန်တားဆေးတွေလည်း သုံးရတတ်တယ်။ ၃-၆ လနေမှ သိသာမယ်။ ရေရှည်ပေးရတယ်။ မျက်နှာမွေးများသူကို eflornithine cream လိမ်းရနိုင်တယ်။ ကိုယ်အလေးချိန် ချသင့်တယ်။
ချိုင်းမွေး မရိတ်ပါနဲ့။ ဖြတ်ပေးပါ။ ရင်ပတ်မွေး ရှိတာ-များတာကို မကြိုက်သူများပေမဲ့ ထူးပြီးကြိုက်တဲ့သူတွေ ရှိတယ်။ တချို့က Don't go Brazilian ယောက်ျားတွေ အမြဲ ဆီးစပ်မွေးရိတ်တာ မကောင်းပါလို့ ပြောကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပခုံးမွေး၊ ကျောမွေး မကြိုက်သူ များတယ်။ တို-ဖြတ်ပေးပါ။ အမွေးကို ပုံစံသွင်း ပြုပြင်တာ ရှောင်ပါ။ တချို့က အရောင်ချွတ်ဆေး သုံးတယ်။ ဈေးချိုတဲ့နည်းက ရိတ်ရတာ။ ဖယောင်းနည်းက ကုလားမတွေ အများဆုံး သုံးကြရတယ်။ အမျိုးသမီးများ ချိုင်းမွေး နဲနဲပါးပါးရှိနေတာကို မော်ဒယ်မဟုတ်ရင် မရိတ်-မဖြတ်ပါနဲ့။
ထူးထူးခြားခြား အမွေးများတဲ့လူမျိုးက ရှားပြီး လူတွေကို စိတ်ဝင်စားစေတာမို့ ဆပ်ကပ်တွေမှာ သုံးတတ်ကြတယ်။ ဥပမာ Julia Pastrana မုတ်ဆိပ်မွေးနဲ့ အမျိုးသမီး၊ သူ့မှာ လက်ဝါးတွေမှာပါ အမွေးတွေ ပေါက်နေတယ်။ အမေရိကန် Dime Museum ပြတိုက်မှာ ပြောစမှတ်တခုရှိတယ်။ မနေ့ညက ဟို မုတ်ဆိတ်နဲ့ မိန်းမ သေသွားတာ ကြားလား။ ကြားတယ်၊ စိတ်မကောင်းစရာ အစစ်ဘဲ။ သူ့မှာ မိန်းမနဲ့ ကလေးသုံးယောက် ကျန်ရစ်တယ်လေ။
မြန်မာပြည်ကလဲ ဒီနေရာမှာ ကမ္ဘာကျော်ပါတယ်။ ကိုလိုနီခေတ်က အင်းဝမှာနေခဲ့တဲ့ ရွှေမောင်းမိသားစုဆိုတာရှိတယ်။ သူ့ရဲ့ ကလေးသုံးယောက်ထဲက သမီး မဖုံးနဲ့ သူ့သား ဖိုးဆက်၊ မြေး မမဲတို့ဟာ Hypertrichosis ရောဂါ ရှိကြတယ်လို့ အိန္ဒိယဘုရင်ခံ ဂျွန်ကရောဖို့ဒ်က မှတ်တမ်း တင်ထားတယ်။
ကျေးဇူး။ ဦးဖိုးကျားမွေးတဲ့ရွာ တိုင်တရာကနေ တိုင်တစ်ရာလို့ ပြောင်းထားကြလေရဲ့။
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း၊ အတွဲ ၇၊ စာမျက်နှာ ၂၉၂-၂၉၃ မှာ အမျိုးသားပညာရေးလောကတွင် ဦးဖိုးကျားသည် ကျော်ကြားသော ခေါင်းဆောင်ကြီးတဦးဖြစ်သည်။ မြန်မာစာပေလောက၌ ထင်ရှားသောပုဂ္ဂိုလ်တဦးလည်းဖြစ်သည်။ ပုသိမ်မြို့ တိုင်တရာ စကောက
ရင်ကျောင်းတွင် ဆက်လက်ပညာသင်ကြားလို့ စွယ်စုံကျမ်းမှာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၂ဝ၁ဝ၊ အောက်တိုဘာလထုတ် မြန်မာသစ် ရသစုံမဂ္ဂဇင်း၊ စာမျက်နှာ ၉၉ မှာ သာရဝေါစိုးကြည်ရေးသားတဲ့ အမျိုးသားပညာဝန် ဦးဖိုးကျားဆောင်းပါး ကျောင်းနာမည်ဟာ တိုင်တရာဖြစ်သွားရတော့တယ်။
မြန်မာ့ပညာရေးအတွက် စွမ်းစွမ်းတမံဆောင်ရွက်ခဲ့သူရဲ့ ကျောင်းနာမည်ကို ပြောင်းခဲ့ကတည်းက အမျိုးသားပညာရေးဟာ ကျဆင်းဆုတ်ယုတ်လာတော့တယ်။
သထုံက မွန်ပြည်နယ်မှာ၊ ပုသိမ်က ဧရာဝတီတိုင်းမှာ။ ယှဉ်ပြောလို့တော့မရ။ ကျွန်တော် မြန်မာစာသင်ခဲ့တဲ့ မုံရွာမှာလည်း တစ်နေသူတွေ များတယ်။ မန္တလေးမှာလည်း တစ်သွားပြီ။ ရန်ကုန်နဲ့ နေပြည်တော်မှာက အများဆုံး။
အဲဒီကာလမှာ ဆင်ဆာကြောင့် မတစ်ချင်လည်း တစ်ကြရတယ်။ အခု ဆင်ဆာမရှိ ဒါပေမယ့့့်
ကျနော်ငယ်ငယ်ကတည်းက နိုင်ငံခြားဆိုတာ သွားရလိမ့်မယ်လို့ ထင်မထားခဲ့ပါ။ ကျွန်တော့်လက္ခဏာမှာလည်း အဲဒီမျဉ်းကြောင်း ပါ-မပါကို မကြည့်တတ်ပါ။ ဒါပေမယ့် ပြည်ပမှာနေရတာတော့ နှစ်အစိတ်ကျော်နေပြီ။
အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝ မြန်မာပညာတော်သင်တွေအကြောင်း သံရုံးတွေကထုတ်တဲ့ စာစောင်တွေထဲမှာ ဖတ်ရရင် အတော်တော့ အားကျတာအမှန်ပါ။ အဲဒါက အမေရိကန်နဲ့ ဗြိတိန်သံရုံးတွေကနေ မှာပြီးဖတ်တဲ့ စာအုပ်တွေထဲမှာ တွေ့တာပါ။ အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝမှာ သံရုံးတိုင်းကနေ စာစောင်တွေ စာအုပ်တွေ လှမ်းမှာတဲ့ ဝါသနာရှိလို့ စာအမျိုးစုံကို ဖတ်ခဲ့ရတယ်။ စာတိုက်ကနေ ပို့ပေးသမျှ အကုန်ပါပဲ။ အနောက်ဂျာမနီ (ဂျာမနီနိုင်ငံက ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီး ပြီးကတည်းက နှစ်နိုင်ငံဖြစ်ရာကနေ ၃-၁ဝ-၁၉၉ဝ ရောက်မှ တနိုင်ငံတည်းပြန်ဖြစ်တယ်) သံရုံးက စာအုပ်တွေက စာရွက်အရည်အသွေး အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ ဆိုဗီယက်၊ တရုတ်၊ ယူဂိုဆလားဗီးယားစတဲ့ လက်ဝဲနိုင်ငံတွေကလာသမျှ စာရွက် အတော်ညံ့တယ်။ လက်ဝဲအယူအဆနဲ့ အမိန့်နာခံမှုကိုသာ ဖတ်ရပြီး သူတို့တိုင်းပြည်တွေမှာ တိုးတက် အောင်မြင်နေကြောင်း၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ချီးမွမ်းထားတာတွေသာ ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကလေးဘဝ နိုင်ငံတကာအရေး အကဲဖြတ်ချက်က သည်လောက်သာ ရှိပါတယ်။
ဆိုရှယ်လစ်ဘက်ယိမ်းတဲ့ (မဆလ) ရေဒီယိုနဲ့ သတင်းစာတွေမှာ အဲဒါတွေသာပါတယ်။ အမေရိကန်သံရုံးက ထုတ်ဝေနေတဲ့ လင်းရောင်ခြည်ဂျာနယ် ပိတ်ခံရတာလည်းသိတယ်။ ဘီဘီစီ ငွေဗျိုင်းဖြူကဏ္ဍ၊ လူရည်ချွန်ကဏ္ဍ ပိတ်ခံရတာလည်း မှတ်မိတယ်။ ဘာလို့လဲတော့ သိပ်မသိခဲ့ပါ။
ဆေးကျောင်းရောက်တော့ နည်းနည်းနားလည်လာတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းအစိုးရကို မကြိုက်တာ မှန်ပေမယ့် တရုတ်ပြည်ကနေ အသံလွှင့်နေတဲ့ (ဗကပ) ရေဒီယိုက အလွန့်အလွန် တဖက်သတ်ဆန်တဲ့ အပြောအဆို အသုံးအနှုန်းတွေကို နားကြားပြင်းကပ်ရာကနေ ၁၉၆၇ တရုတ်အရေးအခင်းမှာ အမှတ်မထင်ပါသွားတယ်။ မန္တလေးနန်းတွင်းထောင်ထဲမှာ တနေ့တာထိန်းသိမ်းတာ ခံရတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းဆန့်ကျင်ရေးလုပ်တာလို့ မပြောလိုပါ။ ကွန်မြူနစ်ဆန့်ကျင်ရေးလို့လည်း တံဆိပ်ကပ်လို့ မရပါ။ ဒီမိုကရေစီလည်း မကြားဖူးသေးပါ။
ဆေးကျောင်းအပြီးမှာ သူငယ်ချင်းတချို့က နိုင်ငံခြားထွက်ကြတော့ နည်းနည်းအံ့သြမိတယ်။ ဘယ်လိုကဘယ်လိုတော့ မမေးမိပါ။ ဆရာဝန်တွေ မလေးရှား၊ ဂျမေကာ စတဲ့နိုင်ငံတွေကို သွားအလုပ်လုပ်ကြတာလည်း ကြားရတယ်။ အဲဒါလည်း မစပ်စုဖြစ်ပါ။ ကျနော်က တောနယ်ဆေးရုံတွေမှာသာ တာဝန်ကျနေပြီ။ နိုင်ငံခြားသွားအိပ်မက် မမက်နိုင်ပါ။
နိုင်ငံရေးထဲရောက်တော့ နိုင်ငံခြားအကူအညီနဲ့ အဆက်အသွယ်ကို တားမြစ်တာသိတယ်။ ကိုယ်က နယ်မှာသာနေရလို့ ဘယ်သံရုံးကိုမှလည်း အဝင်အထွက်မရှိပါ။ ကျနော်က အိန္ဒိယကို သွားခဲ့ရတာ မှန်ပေမယ့်၊ ၁၉၈၈ အရေးအခင်းကာလမှာ အိန္ဒိယသံရုံးကနေ ကူညီတယ်ဆိုတာကို အိန္ဒိယရောက်မှသာ သိတာပါ။ စင်ပြိုင်အစိုးရဖွဲ့ဖို့ရာ စိုင်းပြင်းကြတုန်းက အမေရိကန်သံရုံးကို သွားစကားပြောဖို့ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ အစည်းအဝေးကနေ ရွေးချယ် တာဝန်ပေးထားသူက မသွားတော့ ဗြဟ္မာကြီးဦးခေါင်းက ကျနော့်ပခုံးပေါ် ကျလာပါရော။ တာဝန်ယူရဲတဲ့သတ္တိရှိပေမယ့် အမေရိကန်သံရုံးကို မသွားဖို့ နောက်ဆုံးမိနစ်မှာ ကိုယ်တိုင်ပဲဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ကံတရားကနေ ဖယ်မပေးတာလို့ မှတ်ယူပါတယ်။ သွားလိုက်တာနဲ့ အင်းစိန်ထောင်ထဲ အစောဆုံးဝင်ရတဲ့အမတ် ဖြစ်နိုင်တယ်။
အိန္ဒိယကို ထွက်ရတာကလည်း ဇာတာအရသာဖြစ်မယ်။ သွားဖို့တာဝန်ရှိတာက ထိုင်းနယ်စပ်ပါ။ ၁၉၉ဝ ဒီဇင်ဘာလထဲမှာ ထောက်လှမ်းရေးတွေက အိမ်ကိုလာဖမ်းတော့ လွတ်အောင်ရှောင်နိုင်လို့ နောက်နေ့မနက်ထုတ် လုပ်သားပြည်သူ့နေ့စဉ် နောက်ကျာဖုံးမှာ ဓာတ်ပုံနဲ့အတူ တရားခံပြေးအဖြစ်ပါလာတယ်။ စင်ပြိုင်အစိုးရဖွဲ့ဖို့ ကိုယ့်လူတွေက ထိုင်းနယ်စပ်ကို သွားနေကြပြီ။ ကျနော်ပုန်းအောင်းနေတဲ့ နေရာကနေ ထိုင်းနယ်စပ်ကို သွားဖို့ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ ဖြစ်နိုင်မယ်မထင်ပါ။ အဲလောက်ထိ မစွန့်စားဘို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့ အိန္ဒိယကိုသာ ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ နယ်စပ်ရောက်အောင် ဘယ်ကားမှ ငှားရမှာမဟုတ်လို့ ကိုယ့်ကားကိုသာ ကားလမ်းအဆုံးဖြစ်တဲ့ ဟားခါးအထိမောင်းတယ်။ နောက်ထပ် ၆ ရက်နဲ့ ၅ ည ခြေလျင်ခရီးနဲ့ ချင်းတောင်တန်းကိုကျော်ဖြတ်အပြီးမှာ အိန္ဒိယ-မြန်မာနယ်စပ်ကို ရောက်ပါတော့တယ်။ မမေ့ပါ အဲတာ ၂၁-၁၂-၁၉၉ဝ နေ့မှာ။
အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရကို အဝေးရောက်အစိုးရလို့ မီဒီယာတွေက သုံးပါတယ်။ စစ်အစိုးရကတော့ ပြည်ပြေးလို့ ခေါ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်တွေ ရှိသမျှကို ပြေးရတော့မှန်တယ်။ ကျနော်ငယ်တုန်းက စာအုပ်တွေမှာယူဖတ်ခဲ့တဲ့ သံရုံးတွေရဲ့ နိုင်ငံတွေကို တကယ်ရောက်ရပါတော့တယ်။ စာရွက်သားအကောင်းဆုံးထုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေကို အခေါက်ခေါက် ရောက်တယ်။ မော်စကိုမြို့ကိုတော့ ထရန်ဆစ်သာ ရောက်တယ်။ လင်းရောင်ခြည်မဂ္ဂဇင်း ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့နိုင်ငံမှာ အခြေချလိုက်ရပါတော့တယ်။ အခုတော့ ကျနော်ဟာ နိုင်ငံခြားရောက် ရွှေမြန်မာ လေးသန်းကျော်ထဲက တယောက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ တမြန်နှစ်က စာရင်းချုပ်ကြည့်ပါတယ်။ ကျွန်တော် စုစုပေါင်း (၃၁) နိုင်ငံကို ရောက်ခဲ့တယ်။
၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၅ မှာ ရွေးချယ်ခံရတဲ့လူသစ်တွေကတော့ ကံကောင်းကြပါတယ်။ ပါတီကိုယ်စားပြုပြီး ပြည်တရားဝင်ခရီးတွေ သွားလာနိုင်ကြတယ်။ ကျနော်တို့တုန်းက အန်အယ်လ်ဒီကို ကိုယ်စားပြုပြီး ပြောတာပါလို့ ပြောရပေမယ့် အန်အယ်လ်ဒီ ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ အဆက်အသွယ်လုပ်လို့ မရပါ။ လုပ်လိုက်ရင် အထဲကလူတွေ ထောင်ထဲရောက်ကြမယ်။ ပါတီပါ အဖျက်ခံရနိုင်သေးတယ်။ လူသစ်တွေကနေ နိုင်ငံတကာစင်မြင့်တွေမှာ တိုင်းပြည်အကျိုးသယ်ပိုးဖော်ဆောင်နိုင်ကြပါစေ။